Eindhoven နှင့်အမ်စတာဒမ်ရှိဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ Law & More | နယ်သာလန်
၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူတိုင်း၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းသာမကကုမ္ပဏီများ၊
OR +31 40 369 06 80 ကိုခေါ်ပါ
Eindhoven နှင့် Amsterdam ရှိဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ - Law & More
ရှေ့နေတွေကဘယ်သူတွေလဲ Law & More?
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒတ်ခ်ျဥပဒေ၏ကဏ္ areas အသီးသီး၌အထူးပြုထားသောနိုင်ငံတကာစရိုက်လက္ခဏာရှိသောတက်ကြွသောဒတ်ခ်ျဥပဒေကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒတ်ခ်ျ၊ အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမန်၊ ပိုလန်၊ တူရကီ၊ ရုရှားနှင့်ယူကရိန်းတို့ကိုပြောကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ကုမ္ပဏီများ၊ အစိုးရများ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ဥပဒေနယ်ပယ်များစွာ၌ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်နယ်သာလန်နှင့်ပြည်ပမှဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကတိတည်သော၊ လက်လှမ်းမီသော၊ မောင်းနှင်နိုင်သော၊ အချည်းနှီးသောချဉ်းကပ်မှုကြောင့်လူသိများသည်။
သငျသညျကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ် Law & More သင်ရှေ့နေ (သို့) ဥပဒေရေးရာအကြံပေးသူလိုအပ်သည့်ကိစ္စအားလုံးနီးပါးအတွက်။
•ရက်ချိန်းများကိုဖုန်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။31403690680 + or 31203697121 +), အီးမေးလ် (info@lawandmore.nl) သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်း tool ကိုတဆင့် lawyerappointment.nl;
• Eindhoven နှင့် Amsterdam ရှိရုံးများရှိသည်။
သင်၏တိကျသောမေးခွန်းသို့မဟုတ်အခြေအနေသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်မဟုတ်ပါလား။ ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်တွန့်ဆုတ်မနေပါနဲ့။ ဖြစ်ကောင်းငါတို့သည်သင်တို့ကဲ့သို့ကောင်းစွာကူညီနိုင်သည်။
ငါ၏ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူအလွန်ကျေနပ်မိပါတယ် Law & More။ ကောင်းမွန်သောနှင့်မြန်ဆန်သောဆက်သွယ်ရေးများရှိခဲ့ပြီးရလဒ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်လိုအပ်သောအကူအညီကိုအလျင်အမြန်ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ သူသည်လျင်မြန်စွာတိုက်ရိုက်နှင့်ဂရုတစိုက်အလုပ်လုပ်သည်။ တကယ်အကြံပြုလိုတယ်!
ငါကွာရှင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ကူညီခဲ့သည်။ ငါပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်း၏အလွန်အမင်းအရည်အချင်းပြည့်အကူအညီနဲ့လက်ခံရရှိခဲ့သည် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏အရေးကြီးသောအချက်မှာ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏သီးခြားအခြေအနေနှင့်အကျိုးစီးပွားများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးချဉ်းကပ်မှုဖြစ်သည်။
ငါအမှုသည်နှစ် ဦး စလုံးအတွက်အရေးတကြီး client ကိုနှင့်အတူကြီးမားသောပြlegalနာအပေါ်ဥပဒေရေးရာအကြံဥာဏ်လိုအပ်အဖြစ်ငါ2နှစ်အတွင်းတွမ်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ သူကကျွန်တော့်ကိုအကောင်းဆုံးခြေလှမ်းတွေလှမ်းပေးတယ်၊ အချိန်တိုင်းကူညီပေးတယ်၊ ပြofနာရဲ့အရိပ်နဲ့ရှယ်ယာတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်တယ်၊ သူကနှစ်ခါစလုံးကတုံ့ပြန်မှုအရမ်းများတယ်၊ ကြောင်း၏ဖော်ရွေစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် client ကိုနှင့်အတူစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုကိုဆက်လက်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါရုံးခန်းထဲသို့ခဲဖိနပ်ဖြင့်ဝင်လာပြီးမြူနီစီပယ်မှကျွန်ုပ်၏နေ့ကလေးထိန်းကျောင်းများကိုပိတ်လိမ့်မည်ဟုစာတစ်စောင်ပေးခဲ့သည်။ သို့သော်ကန့်ကွက်စာသည်အလွန်ကျွမ်းကျင်စွာရေးသားထားသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်၏နေ့စောင့်ရှောက်မှုစင်တာသည်ကြားနာပြီးနောက်ဖွင့်လှစ်နိုင်သည်။ ထိပ်တန်းအလုပ်အပ်!
Syndra Osepa၊ Eindhoven
Vlad Dobrovinski, အမ်စတာဒမ်
တရားဝင်ကိစ္စမှာသင်၏ရပ်တည်ချက်နှင့်ပတ်သက်။ စပ်စု Law & More မင်းအတွက်လုပ်ပေးနိုင်မလား ကျေးဇူးပြုပြီးဆက်သွယ်ပါ Law & More။ သင်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးသင်၏မေးခွန်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများအားတယ်လီဖုန်းသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ဖြင့်တင်ပြနိုင်သည်။ ဆန္ဒရှိလျှင်သူတို့သည်သင့်အတွက်ရက်ချိန်းယူရန်စီစဉ်လိမ့်မည် Law & More ရုံး။
ဥပဒေနှင့်ရုံးတွင်ခန့်အပ်မှုပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်းသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ထပ်မံသိကျွမ်းလာမည်ဖြစ်ပြီးသင်၏ဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များ၏နောက်ခံနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဖြေရှင်းနည်းများကိုဆွေးနွေးသွားပါမည်။ ၏ရှေ့နေများ Law & More သူတို့အနေဖြင့်သင့်အတွက်တိကျသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်မည်သည့်နောက်ခြေလှမ်းများဖြစ်နိုင်သည်ကိုလည်းဖော်ပြလိမ့်မည်။
သင်ညွှန်ကြားသည့်အခါ Law & More သင်၏အကျိုးစီးပွားကိုကိုယ်စားပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်စာချုပ်တစ်ခုဆွဲလိမ့်မည်။ ဤစာချုပ်ကသူတို့နှင့်သင်ယခင်ကဆွေးနွေးခဲ့သည့်အစီအစဉ်များကိုဖော်ပြသည်။ သင်၏အမှုအားသင်နှင့်အဆက်အသွယ်ရှိခဲ့သောရှေ့နေကဆောင်ရွက်လေ့ရှိသည်။
သင်၏အမှုကိစ္စကိုကိုင်တွယ်ပုံသည်သင်၏တရားဝင်မေးခွန်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဥပမာ - အကြံဥာဏ်ဆွဲခြင်း၊ စာချုပ်ကိုအကဲဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ်တရားစွဲဆိုမှုများနှင့်သက်ဆိုင်နိုင်သည်။ At Law & More ဖောက်သည်တိုင်းနှင့်သူသို့မဟုတ်သူမ၏အခြေအနေသည်ကွဲပြားကြောင်းကျွန်ုပ်တို့နားလည်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ပိုင်ချဉ်းကပ်နည်းကိုအသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်မည်သည့်ဥပဒေရေးရာပြanyနာကိုမဆိုလျင်မြန်စွာဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားသည်။
သင်သည်ဆင့်ခေါ်စာကိုလက်ခံရရှိပြီးမကြာမီတရား ၀ င်အုပ်ချုပ်မည့်တရားသူကြီးရှေ့မှောက်သို့ရောက်လာရပါမည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
ပျက်စီးခြင်းသည်အခြားသူတစ် ဦး ၏လက်၌ဖြစ်သည်၊ ရဲကဖမ်းသည်ဖြစ်စေ၊ လိုချင်သည်ဖြစ်စေ ... ဆက်ဖတ်ရန်
အချို့သောအခြေအနေများတွင်အလုပ်ခန့်စာချုပ်ပြီးဆုံးသော ၀ န်ထမ်းသည်ဥပဒေအရဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
ရှေ့နေတစ် ဦး ၏ကုန်ကျစရိတ်များသည်တာ ၀ န်အမျိုးအစားနှင့်ယင်း၏ကြာချိန်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏တရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏ကုန်ကျစရိတ်များသည်များသောအားဖြင့်တစ်နာရီနှုန်းပေါ်အခြေခံပြီးပုံမှန်အားဖြင့်ကုန်ကျသည်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်စျေးနှုန်းချိုသာစွာစီစဉ်နိုင်သည်။ Law & More ကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောကုန်ကျစရိတ်များကိုခန့်မှန်းရန်သို့မဟုတ်ကြေငြာရန်ပြင်ဆင်ထားသည်။ ၎င်းနောက်သင်သုံးစွဲသောနာရီနှင့်အလုပ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားသည်။
Law & More အောက်ပါအလုပ်ချိန်နာရီနှုန်းထားများကိုအသုံးပြုသည်။
ရှေ့နေ€ 195 - € 225
မိတ်ဖက်€ 250 - € 275
အားလုံးနှုန်းထားများ 21% VAT ကိုသီးသန့်ဖြစ်ကြ၏နှုန်းထားများနှစ်စဉ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
Law & More ဒတ်ခ်ျဥပဒေရေးရာအကူအညီပေးရေးဘုတ်အဖွဲ့နှင့်ဆက်နွှယ်ခြင်းမရှိဘဲ“ ဖြည့်စွက်ခြင်း” ၏အခြေခံအနေဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။ သင်ထောက်ပံ့ထားသောဥပဒေရေးရာအထောက်အပံ့အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီလိုပါကအခြားဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီနှင့်ဆက်သွယ်ပါရန်သင့်အားအကြံပေးပါသည်။
အဘယ်သူမျှမကိစ္စဥပဒေရေးရာပြissueနာ, ရှေ့နေများမှာ Law & More ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်အစွန်းရောက်မဟာဗျူဟာကို အခြေခံ၍ မည်သည့်ဥပဒေရေးရာကိစ္စမဆိုအစမှအဆုံးအထိလမ်းညွှန်ကူညီနိုင်သည်။ တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများကိုရေးဆွဲခြင်းနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း (သို့) သင့်အမှု၌တရား ၀ င်အကြံဥာဏ်ပေးခြင်းရှိမရှိ။ Law & More မင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်တရား ၀ င်အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းခြင်းနှင့်တရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ ထို့အပြင် Law & More သင့်အားဥပဒေအကြံပေးများနှင့်တရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအဖြစ်သင့်အားကမ်းလှမ်းရုံသာမက sparring partner အနေဖြင့်လည်းသင်ရရှိနိုင်သည်။
ဥပဒေရေးရာပြeveryနာတိုင်းအတွက်ရှေ့နေတွေက Law & More အချက်လေးချက်ပါ ၀ င်သည့်ရှင်းလင်းသောနည်းဗျူဟာတစ်ခုကိုကျင့်သုံးပါ။ တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး သိကျွမ်းလာခြင်း၊ ကိစ္စရပ်ကိုအတူတကွဆွေးနွေးခြင်း၊ အဆင့်ဆင့်အစီအစဉ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့်ကိစ္စရပ်ကိုကိုင်တွယ်ခြင်း။
သင်ဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ် ဦး လား၊ ပုဂ္ဂလိကတစ် ဦး တစ်ယောက်ဟာတရားဝင်ပြproblemနာတစ်ခုနှင့်ရင်ဆိုင်နေရပါသလား။ ထို့နောက်ရှေ့နေကိုခေါ်ခြင်းသည်ပညာရှိရာရောက်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်သင်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ် ဦး ဖြစ်စေ၊ တစ် ဦး တစ်ယောက်ဖြစ်စေဥပဒေရေးရာပြlegalနာသည်သင်၏စီးပွားရေးသို့မဟုတ်သင်၏ဘဝအပေါ်အဓိကဘဏ္financialာရေး၊ At Law & Moreဥပဒေရေးရာပြeveryနာတိုင်းသည်အလွန်များပြားကြောင်းကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ဥပဒေကုမ္မဏီအများစုနှင့်မတူဘဲ၊ Law & More သင်အပိုတစ်ခုခုကမ်းလှမ်း ဥပဒေကုမ္ပဏီအများစုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေ၏အကန့်အသတ်ရှိသောအပိုင်းကိုသာသိပြီးပုံမှန်အလုပ်များကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။ Law & More ကျယ်ပြန့်သောတိကျသောဥပဒေရေးရာဗဟုသုတအပြင်မြန်ဆန်သော ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးချဉ်းကပ်မှုအပြင်သင့်အားကမ်းလှမ်းသည်။ ဥပမာ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်မိသားစုဥပဒေ၊ အလုပ်အကိုင်ဥပဒေ၊ ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေ၊ ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ၊ အိမ်ခြံမြေဥပဒေနှင့်လိုက်နာမှုနယ်ပယ်များတွင်ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလာရင် Law & More စက်မှုလုပ်ငန်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့်လက်လီရောင်းဝယ်မှုအမျိုးမျိုးမှစွန့် ဦး တီထွင်သူများအတွက်ဆောင်ရွက်သည်။
မင်းဘာသိချင်လဲ Law & More Eindhoven ရှိဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကသင့်အတွက်ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ။ ထို့နောက်ဆက်သွယ်ပါ Law & Moreကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများကသင့်အားကူညီပေးလိုသည်။ သင်ရက်ချိန်းယူနိုင်သည်
•ဖုန်းဖြင့်: +31403690680 သို့မဟုတ် +31203697121
•၏စာမျက်နှာမှတဆင့် Law & More: https://lawandmore.eu/ စိတ်ပျက်စရာ/
မည်သည့်ရှေ့နေသည်သင်လိုအပ်သည်မှာသင်၏တရားဝင်မေးခွန်း၏သဘောသဘာဝအပေါ်မူတည်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မင်းကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းရှိလား။ ထိုအခါသင်သည်ကုမ္ပဏီဥပဒေတွင်အထူးပြုနေသောရှေ့နေလိုအပ်သည်။ မင်းရဲ့တရားဝင်မေးခွန်းကနိုင်ငံတကာဇာတ်ကောင်လား။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်နိုင်ငံတကာဥပဒေအထူးပြုရှေ့နေတစ် ဦး နှင့် ပို၍ သင့်တော်သည်။ မှတ်သားသင့်သည်မှာတရား ၀ င်မေးခွန်းအများစုသည်ဥပဒေတစ်ခုထက်ပိုသောကိစ္စများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ သို့မှသာသက်ဆိုင်ရာဥပဒေနယ်ပယ်တစ်ခုစီ၏ဗဟုသုတရှိသည့်ရှေ့နေတစ် ဦး နှင့်ဆက်သွယ်ရန်အရေးကြီးသည်။
Law & More အလုပ်သမားဥပဒေ၊ မိသားစုဥပဒေ၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနှင့်အိမ်ခြံမြေဥပဒေတို့တွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာဥပဒေ၊ အသိဥာဏ်ပညာဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်နည်းပညာနယ်ပယ်တွင်တက်ကြွစွာပါ ၀ င်သည့်ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီတခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒတ်ခ်ျ (လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာဥပဒေ) ၏ကျယ်ပြန့်သောဗဟုသုတအပြင် Law & More ၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုနယ်ပယ်နှင့်သဘောသဘာဝအရနိုင်ငံတကာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သော ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးနိုင်ရန်ဘာသာစကား၊ အင်္ဂလိပ်၊ ဂျာမန်၊ ပြင်သစ်၊ စပိန်၊ တူရကီ၊
သင်အခြားဥပဒေနယ်ပယ်တစ်ခုကိုရှာဖွေနေပါသလား ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေနယ်ပယ်အားလုံးကိုဖော်ပြထားသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်မှုစာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်ဖော်ပြထားသောနယ်ပယ်အားလုံးတွင်ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ပြီးမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသင့်အားကူညီပေးရန်အသင့်ရှိပါလိမ့်မည်။